Coffee - it is a yokudlela encane, okuyinto lihlukile amaphuzu iIgama ibanga ekhethekile. Lapha, izivakashi nethuba oda, ehlanganisa ikhofi okumnandi futhi engavamile confection. Kulokhu, ikhofi izindlu, njengoba umthetho, awanikeli ukudla okulula, izitsha main noma salads.
Uma ufisa ukuziqalela amabhizinisi abo aphumelele ke omunye kukho kuyafaneleka ukucabangela ngamathuba okuvula ukusungulwa ezinjalo. Kulokhu, lapho besanda kuqala omcimbi wakho kufanele kube business plan.
osomabhizinisi sifisa, okokuqala, kudingeka ukuthuthukisa coffee shop business plan. Lo mbhalo, elizoquketha izimpendulo nezindaba kunazo ukuphokophela. Ukuze iqhinga coffee shop ibhizinisi, kubalulekile ukuhlaziya izimali oluzayo, usebenzisa izibalo kanye izibalo esivezwa.
osomabhizinisi sifisa kufanele babhalise ehhovisi lentela. Ukuze wenze lokhu, khetha ububanzi ezifanele imisebenzi yayo ayezosenza maduze sokuthi ifomu lwenhlangano zomthetho. Kungaba PI noma LLC. Lapho nokubhalisa sicela uqaphele ukuthi NCEA yakho - ". Umsebenzi we zokudla nezindawo zokudla" 55,30
Emva kokuthola yonke imininingwane ebalulekile, okuyizinto ezibalulekile for kokuvula ikhofi izitolo, bhala futhi isicelo intela umbuso wanikhethela. Uma kwenzeka ukuthi ngeke akwazi ukuqhuba ibhizinisi labo ku UTII inketho enenzuzo kakhulu kungaba uhlelo intela lula (15%).
Uma kwenzeka ukuthi isikhungo sakho kuzothatha ukudayiswa utshwala, uthole ilayisensi. Ukuze ugweme inhlawulo unswinyo ke kuyodingeka unakekele kusengaphambili
coffee shop uhlelo lwebhizinisi kufanele ibe isahluko lapho khona isikhungo sakho uzobe kuchazwe. Kusukela indawo nelungelo into ngokwezinga elikhulu ke kuncike ekuphumeleleni kwebhizinisi. Kahle kahle, esitolo ikhofi kufanele zitholakale endaweni ophithizelayo kakhulu.
Dala uhlelo lwebhizinisi isikhungo sakho kumele sifake ekhatsi loku ukubuyekeza izinketho engcono, kuhlanganise:
- khona eduze metro station;
- ukweqa emigwaqweni ephithizelayo;
- Isifunda sebhizinisi;
- yokuthola eziyinxanxathela eseduze nezikole, ujantshi iziteshi kanye nezimakethe.
Kepha izindawo ilele, abanye ensimini yabo egumbini kungenziwa kwaqashwa imali encane. Nokho, kuhle ukucabangela iqiniso lokuthi inzuzo leli bhizinisi kuyoba eliphansi kakhulu. Sizoba inzuzo enhle mini coffee shop. Le ndawo yokudlela encane lapho izihlalo ezimbalwa kuphela. Leli phuzu libuye ngokuvamile kuhlanganiswe esitolo onguchwepheshe ukudayisa yekhofi. Naphezu kwendawo yayo encane, nenzuzo yayo ukuze idlule amaphesenti eziyinkulungwane.
coffee shop ibhizinisi Uhlelo lolu kuzomele futhi ezidinga ukucatshangwa ongakhetha ezahlukene ezifaneleke ebhizinisini lakho izakhiwo. Lesi sigaba kudingeka silalelisise ngokuqondene nanoma yimaphi iIgama izindawo nezimfuneko inhlanzeko esiqinile. Ungafunda nabo "Imithetho Technical on Fire Safety Izidingo", kanye nesinqumo yenduna udokotela Russian sanitary of 31.03.2011 №29. Lezi zimfuneko eziqukethwe SanPiN 2.3.6.1079-01.
Sibala kwamasonto ayinhloko:
1. khona ungqimba umsindo-ubufakazi. Uqinisekisa kugwenywe umsindo abahlala emizini eseduzane.
2. Le ndawo kwezikhungo eyenzelwe izihlalo amahlanu, akufanele kube square metres ngaphansi kwezinkulungwane eziyikhulu, ziyikhulu namashumi ayisihlanu. Ukuze silungiselele emaswidi ikhofi nanhlanu kuya amabili square metres lokwabelwa
Futhi kudingeka acabangele lezo zimfuneko ezisebenza pozharnadzorom. Kuphela uma enza imisebenzi yakho ezocatshangelwa esisemthethweni. Kufanele kucatshangelwe, nezimfuneko sanitary-epidemiological. Icubungula kanye nokulungisa imikhiqizo, kanye izitsha ukukhonza kumele kubanjelwe ezindaweni eziqinile ngokuhambisana nalokhu.
ukuqala uhlelo lwebhizinisi kufanele ucabangele zonke izici kunjalo ibhizinisi, okuzodingeka nomthelela ekuphumeleleni umcimbi. It kuyafaneleka ukucabangela lokho waziwa futhi kungakho inzuzo ikhofi ngamunye incike elingaphakathi yayo. Ekucubunguleni le nkinga kubalulekile ukukhomba iphuzu eliyinhloko lesikhungo, futhi phansi ezicashile kokuncane kunakho konke kuya cabanga ilungiselelo ifenisha, umbala scheme izindonga ophahleni, njll Kumele kukhunjulwe ukuthi wezangaphakathi kumele abe inhlanganisela yonke imininingwane, futhi ngisho inikeza isikhungo sakho zekhofi, kanye confectionery. Igumbi nomklamo kubangela isimo ethokomele futhi ngendlela ekhethekile yokusungulwa. Ayikho imikhawulo kukhethwa kungekho isitayela. Konke kuncike kuphela imibono yakho, izifiso kanye nezinto ozikhethayo.
Ibhizinisi uhlelo nge izibalo kanye nencazelo kwazo zonke izingxenye zomzimba kufanele ahlinzeke ikhofi delineation izindawo kule mikhakha emibili. Omunye wabo uyoba for non-ababhemayo, kanti eyesibili - abathandi ugwayi. Ungaphuthelwa le nkinga. izivakashi engaba khona siyabonga onakekelayo futhi ujabule waphinda ukuvakashela yokudlela yakho.
Ukuze imishini ikhofi kufanele lifake air conditioning nokushaya komoya. Kumele kukhunjulwe ukuthi kufanele kube lizinga lelisetulu nekghono. Khona-ke amakhasimende bayoyazisa.
Izinsiza kusebenza kanye ifenisha
Uma wenza izinhlelo zebhizinisi, izibonelo ngomumo eyenziwe for kuvulwa izikhungo enjalo kuzokusiza unqume on ukuthengwa ezidingekayo imishini yasendlini. Ngayiphi kufanele etshaliwe dolobha ekuqaleni-up? Isigaba for yokufuna imishini futhi ifenisha, okuhlanganisa kakade ebhaliwe business plan nge sibalo ukutshalwa kwemali, bheka ngezansi. Ngakho, uzodinga:
- ababili noma abathathu imbala ngoba ama-ruble ayizigidi 50 .. ngamunye;
- mixer professional uhlobo (3 wena ..);
- ikhofi (ruble angu-30.);
- echwepheshile uhlobo ikhofi grinders (ama-ruble ayizigidi 15.);
- wokuhlanza (ama-ruble ayizigidi 20 ..);
- Umbukiso (150 wena ..);
- elilodwa noma amabili ahlabayo amatafula (i-ruble ayizigidi 10 ..);
- Microwave (ama-ruble ayizigidi 3 ..).
Kuye umsebenzi obekwe phambi endlini ikhofi kungabuye ithengwe:
- iKhabhinethi wokubhaka Culinary (ama-ruble ayizigidi 60 ..);
- efrijini (ama-ruble ayizigidi 30 ..).
Kufanele kuphawulwe ukuthi isibalo grinders uthenge kumele silingane nesibalo zekhofi kumakhasimende. Kuphela kuleli cala lika okusanhlamvu ngeke ziphazamise nomunye.
Ukuthengwa ifenisha okumele ukunikeza izinhlelo zebhizinisi? izibonelo Ready kwemibhalo efana ethilomu nendawo ethize amamitha 150 square, ukuthengwa ohlongozwayo:
- amatafula (40-60 PC.);
- izihlalo (130-150 PC.);
- iziphanyeko (omunye etafuleni 2-3 ngayinye);
- sideboard isikhonzi.
Imishini kwekhofi kufanele kufake tinhlobonhlobo ekhaya impahla ukuthi ukudala isimo esinokuthula sakuleli, kanye ekhishini nezinto ezihlukahlukene lokulungiselela confectionery kanye iziphuzo supply.
Yini enye engingabuye ezahlukene ikhofi ukuvulwa izitolo? Uhlelo lwebhizinisi iyawakha nguwe, kuzomele sifake uhla lokudla kanye iziphuzo ezizohanjiswa izivakashi. Amakhasimende kunamathuba amaningi okuthi ukuvakashela lezo zindawo lapho kukhona izinhlobo ezahlukene nezinhlobonhlobo ikhofi Ngaphambi Kokuphrinta kwimenyu. Ukunikeza Mocha kuwufanele futhi espresso, cappuccino kanye Latte, Americano futhi ristretto, okungukuthi zonke okudume kakhulu phakathi kwabantu. khona ezihlukahlukene Syrups, unganikezwa kwimenyu. Ngaphandle ikhofi izinkomishi kumele ithengwe e letingemasayizi lahlukene. Kulokhu, isivakashi ngasinye ayoyikhetha ivolumu oyifunayo isiphuzo ngaye.
Uhlu olungenhla eziyisisekelo kwekhofi ngamunye. Imenyu okwengeziwe kuzoncika nezifiso zakho. Lungase luhlanganise namabhanisi kanye dessert elimnandi, okuyinto kuhle ehlangana ikhofi eqinile. izitsha Amanye esigabeni sokuqala lesi sipho akufanele kube. Ukunwetshwa senhlobo, kuyinto efiselekayo ukukhiqiza uma ibhizinisi kuyoba lapho ukuletha imali yangempela, futhi uzoqala sikhule, ucabange indlela ukudala uchungechunge zakho ikhofi izindlu.
Ukuze inzuzo, indlu ikhofi okufanele unikele amaklayenti kuphela high quality isiphuzo. Yingakho kudingeka baqonde ukunambitheka eluhlaza, ikakhulukazi ukuhlola kahle ifomu ezingeni ubhontshisi yokuwugazinga, kanye nombala wako. Konke lokhu kuzosiza ukucacisa ukungabi noma khona ukungcola ezahlukene ikhofi.
Iphunga okusanhlamvu kufanele bahlanzeke ngokuphelele. It akanawo ukwethula yimuphi amanothi osolisayo. Udinga ukuhlola lonke okuningi. Imikhiqizo izinga okusanhlamvu lonke kukhona usayizi ofanayo nombala.
Ukuze izinto ngendlela ehlelekile umsebenzi udinga ukunika amandla ikhofi yakho esifundazweni izikhundla ezifana:
- labapheki ezimbili (ukusebenza ngezikhathi ezingafani);
- oweta abane (ezimbili shift ngalinye);
- the bartenders ezimbili;
- Amabili wokuhlanza abesifazane.
Uma uhlelo lwebhizinisi uye walungisa yakhiwa ekulungiseleleni kophudingi zabo, udinga ukunika amandla abasebenzi kanye nobuchwepheshe. Futhi uzodinga wamabhuku ezimali, umshayeli, okuyinto ukuze banciphise izindleko abasebenzi kungenziwa waqasha itoho.
Ngo ukwakheka izindleko ezihlongozwayo coffee shop ukudla kanye iziphuzo kufanele kubhekwe:
- izindleko izinto zokusetshenziswa;
- izimbangi intengo for iziphuzo efanayo kanye confectionery;
- zabathengi isidingo.
Ngesisekelo zamanani kumele isekelwe esimisweni ukusibekela zonke izindleko ezivelayo futhi inzuzo eyanele ukuze ukuqhubeka.
Akubalulekile ukuchitha imali nokuqwashisa umphakathi emikhulu mayelana nomsebenzi ikhofi lakho. Uhlasela nemphumela lomkhulu ukunikeza ukukhangisa abahlosiwe, ibalwa engicabanga ukuthi angaba yikhasimende. Ngokwesibonelo, budebuduze indawo lapho iketango ikhofi indlu, kunika emaflaya abedlula ngendlela okufanele kube ngayo. Umnikazi omunye wabo okuyofanele inkomishi mahhala ikhofi.
Sithandwe amakhasimende futhi wabenza ufuna ukuvakashela ngokuphindaphindiwe yokudlela yakho iyakhona kuchumana onekhono umphathi umdayisi. Ngokusho abanikazi iningi ikhofi izitolo, it kwandisa nekusebenta ungcono ezikhangiso, izaphulelo kanye candy ukhululekile inkomishi cappuccino.
Inani izimali kanye nezinzuzo
Ukuze uvule esitolo ikhofi, endaweni kuyoba ulingana ngayikhulu namashumi ayisihlanu square metres, kuzothatha ruble kusuka 2 kuya ku-6 million. Ngokusho izibalo wokulungiselela, inhloko-dolobha yokuqala uyonikwa imbuyiselo egcwele cishe iminyaka emithathu. Nokho, kufanele kukhunjulwe ukuthi lesi sikhathi ngazo zonke usomabhizinisi yakho, futhi ubude bayo incike isikhungo enzuzo wathola.
Ibhizinisi for kuvulwa ikhofi isitolo sakhe siqu - kuba ethembisa kakhulu. Ukuze uqonde lokhu, lwanele ukubala inzuzo ezivela inkomishi vegan isiphuzo esifanayo enongiwe. Ngakho, i-espresso ukuthatha amagremu eziyisikhombisa zekhofi. Amakhilogremu of izinto zokusetshenziswa uthole namashumi amane servings. Njengoba izindleko kabhontshisi wekhofi e ayizinkulungwane 1.2. Ruble ngayinye amakhilogramu engenayo evela ukudayiswa isiphuzo kuyoba ayizinkulungwane 11.2. Deda. (Intengo inkomishi - 80 deda.). Izibalo zibonisa ukuthi inzuzo yenkampani yakho ngeke idlule 800%.
Amathiphu osomabhizinisi yimpumelelo
Labo osomabhizinisi abavule ikhofi yabo futhi kakade ngithola engenayo evela emisebenzini yayo, kunconywa:
1. Ungafuni uguqule yokudlela yakho ukuze yokudlela. Lokhu kuhluke ngokuphelele futhi izindleko ngokunakekela. Igama elithi "ikhofi" kusho ikhofi. Ngakho-ke, focus kufanele libekwe sasithola lesi siphuzo.
2. Nakekela ilungiselelo ngempumelelo ikhofi. Ungakhohlwa ukuthi yokudlela yakho ngeke ezihlobene ukuhweba iimfesi. Yingakho indawo omuhle uyisisekelo esihle impumelelo yayo. Nokho, uma esitolo ikhofi kuzovula endaweni ophithizelayo. Akukubi futhi, uma izakhiwo namafasitela amakhulu. Bedlula abedlula ngendlela, ngibona abantu ngesikhathi ikhofi amatafula, uyofuna beze abe isiphuzo emangalisayo.
3. Musa uthole izimpahla balwe futhi esikhonzini ezengeziwe. Yiqiniso, nge kwatheleka enkulu izivakashi kukhona isifiso ubaphe sandwich noma sandwich. Imenyu ahlukahlukene uzothola inzuzo. Kodwa ungakhohlwa injongo eyinhloko esikhungweni. Abantu uvakashele kuphela ukujabulela ingxoxo futhi inkomishi isiphuzo. Labo abanesifiso ukudla, ukuya cafe noma restaurant.
4. Ekuqaleni, ungakwazi ukuthenga namakhekhe ohlangothini. Kungaleso sikhathi kuphela lapho, kubuyela endabeni imali etshaliwe, kuhle ukucabangela yokufuna imishini leli lungiselelo lokukhulekela esitolo zabo wokubhaka.
5. Athole izisebenzi zabantu nezilandiso. Musa unake engu-ikhandidethi futhi isikhundla sakhe emphakathini. Isimo eziyisisekelo isisebenzi ezinhle uyoboshwa yiwo.
6. Feza ukulawula siqu lesikhungo. Noma yiliphi ibhizinisi ongahluleka, uma umnikazi engathandi ukuba abe nesithakazelo inqubo yakhe. Ngisho elichumayo coffee shop ngokuqinisekile izoyenqaba uma hhayi sizithibe ngesilinganiso siqu. Yiqiniso, uma kukhona inethiwekhi amathilomu, ukuqapha umsebenzi wabo uba nzima kakhulu. Kulokhu udinga ukudala isikimu ecacile ukuphathwa noxhumana nabo nezinhloko zeminyango.
Indlela ukugibela skateboard: izinyathelo kuqala Wabasaqalayo
Izici yokuphimisa amagama ngendlela Russian
Examination Bad Ukuze Weight Loss